Sida loogala soo degsado barnaamijyada Play Store adigoon haysan akoon Google | Androidsis
Sida loogala soo degsado barnaamijyada Play Store adigoon haysan akoon Google ah
Pablo Aparicio | | Codsiyada Android, Khiyaamada Android, Tababarada
Tani waa wax ku dhaca dhammaan nidaamyada hawlgalka, laakiin waxaa laga yaabaa inaan jeclaan lahayn inaysan sidaas noqon. Waxay u badan tahay inaad iibsatay qalab Android ah, waxaad u tagtay inaad kala soo baxdo WhatsApp, si aad tusaale ugu bixiso mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan, waxaadna ogaatay inaadan awoodin inaad abuurto ama aad xisaab gasho mooyee. Ma rabtaa soo dejiso barnaamijyada adigoon isticmaalin koontada Google? Sii wad akhriska.
Waxa lagu sharaxay casharradan yar ma sharraxayaan wax khatar ah. Taasi waa, dhammaanteen waan ognahay inay jiraan dukaamo dalab saddexaad ah oo aan lahayn amni badan (haddii ay haystaan) sida Google Play Store, oo ah dukaanka rasmiga ah ee barnaamijka Android. Waxa ugu fiican ee khiyaanadan ayaa ah taas waxaan ka soo dejineynaa codsiyada dukaanka rasmiga ah, kaas oo noo oggolaan doona inaan rakibno APK ah, aragti ahaan, horayba dib ugu eegay Google lafteeda sidaasna waad ku raaxeysan kartaa barnaamijyada Google Play bilaash in aan maalin walba daabacno. Hoos waxaad ku sharaxday talaabooyinka la raacayo.
1 Talaabooyinka la raacayo si looga soo dejiyo barnaamijyada Google Play xisaab la'aan
2 Nidaamkani ma nabad baa?
3 Maxaan ku kasbaneynaa adoo adeegsanaya qaabkan?
Talaabooyinka la raacayo si looga soo dejiyo barnaamijyada Google Play xisaab la'aan
El tusaale ahaan waan adeegsan doonaa casharkaan wuxuu noqon doonaa arjiga fariinta WhatsApp. Waan ogahay inay jiraan kuwa ka fiican, laakiin WhatsApp waa mid ka mid ah barnaamijyada bilaashka ah ee ugu caansan barnaamij kasta, markaa aniga waxay ila tahay inaysan ahayn ikhtiyaar xun.
Waxaan fureynaa biraawsar kasta oo noo ogolaanaya inaan soo dejino faylasha.
Waxaan tagnaa Google Play Store oo waxaan raadineynaa codsi aan rabno inaan rakibno. Waxay u egtahay in taleefanka casriga ah ama kan kiniinka ah waxa aan raadineyno uusan muuqan, marka fikrad fiican ayaa noqoneysa in la raadiyo arjiga adigoo raadinaya Google. Tusaalaha WhatsApp, waxaan ka raadiyay "whatsapp google play".
Markaan galno bogga rakibaadda arjiga, waxaan eegeynaa barta URL-ka oo aan nuqul ka qaadaneynaa waxa ka dambeeya astaanta siman (=) Marka laga hadlayo WhatsApp, waxa aan koobiyeyn karno waa «com.whatsapp & hl= waa«.
Hadda waxaan tagnaa bogga Downloader APK ah, oo laga heli karo CADADKA.
Sanduuqa wadahadalka, waxaan ku dhajineynaa wixii aan soo guuriyay ee ku jira tallaabada 3.
Marka xigta, waxaan taabanaynaa «Abuuri download link«.
Tallaabada xigta waa inaad gujisaa badhanka cagaaran, halkaasoo ku qoran «Riix halkan ilaa download CODE_DE_LA_APP hadda«, Halkee« CODE_DE_LA_APP »wuxuu noqon doonaa Aqoonsiga arjiga ee aan rabno inaan rakibno. Soo dejinta ayaa bilaabmi doonta.
Marka soo dejintu dhammaato, waxaan raadineynaa faylka la soo dejiyey. Goobtu waxay ku xirnaan doontaa biraawsarka aan u adeegsanay inaan kala soo baxno APK-ka barnaamijka. Xaaladda Firefox, soo degsashadu waxay ku jiraan badhanka xulashooyinka (saddex dhibic) / Qalab.
Waxaan socodsiineynaa APK si aan u bilowno rakibidda.
Ugu dambeyntiina, waxaan u raaceynaa nidaamka sidii markii aan u rakibeyno codsi kasta oo kale.
Nidaamkani ma nabad baa?
Gebi ahaanba ammaan. Sidii aan horey u sharaxnay, habka loogu rakibo barnaamijyada Google Play xisaab la'aan wuxuu xambaarsan yahay magaca keydka rasmiga ah ee barnaamijka Android. APK-yada la soo dejiyey iyadoo la adeegsanayo nidaamkan waxaa si toos ah looga helaa Google Play, markaa waxaan dhihi karnaa in iyaga lagu rakibo nidaamkan ayaan ka ammaan iyo amaan badnaaneyn sidii looga sameyn lahaa dukaanka rasmiga ah ee arjiga.
Dabcan, talaabooyinka kujira casharkaan ma aanan sheegin wax muhiim noqon kara: waa Waa lagama maarmaan in aan u oggolaanno rakibidda ilaha aan la garanayn si ay u awoodaan inay ku rakibaan APK-yada la soo dejiyey. Haddii had iyo jeer aan u oggolaanno, ma arki doonno wax digniin ah, laakiin haddii aynaan haysan, waxay noo sheegi doontaa inaysan ku rakibi karin arjiga sababo nabadgelyo awgood.
Sababta aan u aragno ogeysiiskan waa mid fudud: in kasta oo APK uu ka yimid Google Play, waxa kaliya ee aaladdayada Android ay ogtahay waa in laga soo dejiyay internetka, sidaa darteed waxay nooga digaysaa in laga yaabo in wax laga beddelay si loogu daro koodh xun. Laakiin mar labaad ayaan ku celiyaa, Codsiyada lagu soo dejiyey habkan waxay si sax ah u yihiin ammaan sida kuwa laga soo dejiyey dukaanka rasmiga ah ee Android.
Maxaan ku kasbaneynaa adoo adeegsanaya qaabkan?
Hagaag, wax walba waxay ku xirnaan doonaan. Inbadan oo adeegsadayaal ah ayaa ka walaacsan asturnaantayada. Waan ogahay dadka aan jeclayn inay u shaqeeyaan "GAFA" (Google, Apple, Facebook iyo Amazon) iyo waxay doorbidaan inayan u sheegin shirkadahan waxa, sida iyo goorta ay wax isticmaalayaan. Dhinaca kale, adeegsiga qaabkan ayaa waxoogaa dhib ku ah Google si loo ogaado barnaamijyada aan ku isticmaalno qalabkeena macruufka ah. Waan ogahay inaysan ku badnayn, laakiin waa la fahmi karaa.
Dhinaca kale, qaabkani sidoo kale waa loo tilmaamay dadka aan isticmaalin adeegyada Google. Maxay tahay sababta loo abuuro xisaab haddii dhammaan isticmaaleyaashani ay rabaan inay soo dejistaan ​​barnaamijyada? Waxaa laga yaabaa inaad ka soo degsato barnaamijyada Google Play xisaab la'aan ma sahlana sida aad uga sameyso dukaanka arjiga rasmiga ah, laakiin anigu uma abuuri lahaa naftayda kaliya sababtan darteed.
Casharkaan waxtar ma ahaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loogala soo degsado barnaamijyada Play Store adigoon haysan akoon Google ah
Isku day inaad kala soo baxdo dukaanka ciyaarta shabakadaha la isku halleyn karo, iska ilaali soo degsashada tooska ah ee ka soo baxa warbaahinta dabka. Halkaas waxaad had iyo jeer kuheleysaa noocaaga Play Store oo casriyeysan.
Jawaab Angel Luis
Waan jeclahay waxay daabacaan, waa ciyaar qurxoon, nooc kasta oo appssss ah !!!!!!!!: - *: - *: - *: - * Waa hagaag, magac ayaan galaa, ka dib emayl ka dibna webka… .. Ugu dambayntii waxaan qoray faallo iyo pppuuufffff faallooyin kale ayaa muuqday waxaan isku dayay wax kasta oo faallooyinka la yidhi imikana waan soo dejisan karaa ciyaaro aan lahayn dukaan ciyaar: - *: - *: - *: - *: - *: - *: - *: - *: - *
Ku jawaab Cele
Si khalad ah markii aan u soo dajinayay arjiga waxaan pdf u dhigay si qalad ah hada codsi kasta oo hoosta galaa wuxuu si toos ah u aadaa halkaas mana garanayo sida loo saxo, qof naxariis badan ayaa iga caawiya inaan xalka helo find. Waad ku mahadsantahay dareenkaaga.
Ku jawaab daniel lopez beltran
Aad ayey ii caawisaa. Waan soo dejisan karaa codsiyada ii sheegaya in aan laga heli karin waddankayga. Aad baad u mahadsantahay! Tan iyo wax walba. Waan jeclahay androidsis.
Ku jawaab Deyanira
Waxaan isku dayay inaan soo dejiyo droidcam, laakiin ima aysan siinin Aqoonsiga dalabka, waxay i siisay fariin: adigu waa lagaa xaddidan yahay, fadlan iskuday 1 saac markale kadib.
Ku jawaab Cynthia
Sidee caajis Google ii dhigtay. Marka laga reebo mar kasta oo aan wax muhiim ah ka taabto nidaamka wax kastoo ay yihiinba, waxaan ku qaataa laba saacadood inay mar kale shaqeyso. Weligeedna isku mid ma aha.
Laakiin ma doonayo inaan isticmaalo Google gabi ahaanba. Xitaa waxaan dareemay culeys badan: hadaadan tan dhaqaajinin, taasi ma shaqeyso iyo kun jeer